ARC Real estate services Kanbae Towers Condominium
Kanbae Towers Condominium
Home Our Local Kanbae Towers Condominium
*** ရန်ကုန်မြို့ ၏ ပထမဦးဆုံး Smart Condominium ဖြစ်သည့်​ KANBAE TOWER
- မြန်​မာကျပ်​​ငွေဖြင့်​သာ​ရောင်းချ​ပေး​သော​ကြောင့်​ ​ဒေါ်လာ​ဈေးအတက်​အကျ စိတ်​ပူစရာမလို​ခြင်း
- CBD Zone ထဲတွင်တည်ရှိသောကြောင့် ပြန်ငှါးမည်ဆိုပါက ခန့်မှန်းခြေ တလကို သိန်း ၂၀ ဝန်းကျင် ပြန်လည်ရရှိ​​မည့်​ အ​ကောင်းဆုံး investment​ ​တစ်​ခု ဖြစ်​ခြင်း
- နောက်(3)-(4)လအတွင်းမှာပဲ အခန်းအပ်တော့မှာမို့ ​ဈေးမတက်​ခင်​ အမြန်​ဆုံးဝယ်​ယူထားသင့်​တဲ့ အ​ကောင်းဆုံးအချိန်​အခါဖြစ်​ခြင်း
- ရန်​ကုန်​မြို့၏ အချက်​အချာအကျဆုံး အနာဂတ်​ စီးပွားရေးဇုန် အဖြစ်သတ်မှတ်ထားသော ရန်ကင်းမြို့ နယ်၌ တည်ရှိခြင်း
- အနှစ် (၆၀) ဂရန်မြေ အမျိုးအစားပေါ်တွင် တည်ဆောက်ထား​ခြင်း​ကြောင့်​ သားစဉ်မြေးဆက် လက်ဆင့်ကမ်းပေးနိုင်ခြင်း
- လူ​နေမှုဘဝ၏ ​နေ့စဉ်​ လိုအပ်ချက်များဖြစ်​​သော ဈေးဝယ်စင်တာ၊ ရေကူးကန်၊ အားကစားခန်းမ၊ ကလေးကစားကွင်း၊ ပန်းခြံ နှင့် အနားယူ အပန်းဖြေနိုင်သော နေရာများထည့်သွင်း တည်ဆောက်ထားခြင်းတို့ကြောင့် လူကြီးမင်းတို့၏ လိုအပ်ချက်များကို တစ်နေရာတည်း ပြီးပြည့်စုံစွာ ရရှိနိုင်ခြင်း
- နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီ security systemsများ ထည့်သွင်း အသုံးပြုပေးထားမှာဖြစ်လို့ လူကြီးမင်းတို့ လူနေမှုဘဝ နှင့် မိသားစုလုံခြုံမှုကို အပြည့်အဝပေးနိုင်​ခြင်း
- Smart Condominium ဖြစ်​သည့်​အ​လျောက် 📡 Free Wifi ၊💡Aircon,မီး အဖွင့်အပိတ်များကို မိမိဖုန်း သို့မဟုတ် Tablet မှ အဖွင့်အပ်ိတ်လုပ်နိုင်​သော Smart System ၊ 🚗 အလိုအလျှောက် ကားပါကင် စနစ်၊ 🚰 Building တခုလုံးကို Purified Water System တပ်ဆင်ထားခြင်းတို့​ကြောင့်​ လူကြီးမင်းတို့၏ လူမှုနေမှုဘဝကို လုံးဝကို Smartကျ​စေခြင်း
စသည့်​အချက်​များ​ကြောင့်​ Kanbae Towersသည် ​ပေးရသည့်တန်ဖိုးနှင့်​ ​​အတန်​ဆုံး valueကို ပြန်​လည်​ရရှိ​​စေမည့်​ ရန်​ကုန်​မြို့တွင်​ ဝယ်​ယူ ရင်းနှီးမြှုန်​နှံရန်​ အသင့်​​တော်​ဆုံး Condoတစ်​ခု ဖြစ်​​ပါသည်​။
🏙#Facilities 🏊‍♀Swimming Pool 🛒 Shopping Mall 🏋 Gym 🤸‍♂ Kid's Playground 🌳 Garden 🚗 Auto Carparking System 🚰 Purified Water System
🔐#Security Systems ⚔ 24 hours CCTV System ⚔ Sensor System ⚔ E- Card System ⚔ Video Intercom System ⚔ Public Security
🌇#Views * Innya Lake View * Moe Kaung Pagoda View * Swel Daw Pagoda View * Garden View
ဒါ့အပြင်​ 🏝 အင်းယားကန်ဘောင်၊ 🏨 Sedona Hotel၊ Micasa Hotel၊ ကျန်းမာ​ရေးအတွက်​ 🏩ရန်ကင်းကလေးဆေးရုံ၊ အားကစားဝါသနာပါသူများအတွက် 🏟 သုဝဏ္ဏအားကစားကွင်း၊ ​ဈေးဝယ်​ရန်​အတွက်​ Myanmar Plaza နှင့် Yankin Center၊ ဘုရားသွားကုသိုလ်ယူရန်​အတွက်​ 📿မိုးကောင်းဘုရား၊ 📚ပညာရေးအတွက်လည်း Yankin Education College, Myanmar International School အပြင် BEHS (2) South Okkalapa စသည့် အ​ရေးပါ​သော ​နေရာများနှင့်​ အနီးဆုံးတွင်​ တည်​ရှိပါသည်​။
💁 အသက်​သာဆုံး​ဈေးနှုန်း​ အ​ကောင်းဆုံး promtion ​တွေနဲ့ ဝယ်​ယူနိုင်​မယ့်​ အခွင့်​အ​ရေး​တွေကို လက်​မလွတ်​ရ​အောင် Appointmentလေးယူပြီး​ လာ​ရောက်​​လေ့လာကြဖို့ ဖိတ်​​ခေါ်အပ်​ပါတယ်​...
ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်း - ☎☎☎ +959 442725957
Land type: Grant Land Site Area: 96,223 sq.ft（2.2 acres)
Total number of Units: 510 units Height of building : 25 Story +2Basement
Project Type: Residence + Commercial Number of Block :4(A,C,D and E)
Floor Area Ratio:6Green land ratio: 30%
Expected handover date: March 2020 Number of Parking lots: 625 lots
1 bedroom (21 units) 437.45 sqft
2 bedroom (263 unit) 623.66 sqft - 952.07 sqft
3 bedroom (121 unit) 1079 sqft - 1121.5 sqft
24 hours CCTV system,24 Hours Security System,each building 2Lifts,,1 feet height Ceiling,8.5 RS system,Waste Management,Garden Landscaping,Maintain the Building and Rental Service
Developer : Golden Thitsar Co., Ltd
which isajointly venture company invested by two companies.
1.Toener International (Hong Kong) Investment Group. --- HK company (Toener Group)
2.Southern Metal Industry Group ---SMI, local professional steel structure supplier
Other Projects: Riverfront Garden Condo (31-Acre site beside the city’s Hlaing River)
Toener Investment Group and local partner SMI Co., will also build 13 Condominium towers project in Hlaing Tharyar Township which is very close to some of Myanmar’s largest Industrial zones.
No.9/11, Kanbae Station road, Yankin Township, Yangon
MYSM international school
ILBC international school
Yankin High School
Yankin Children Hospital
Aqua Inya Golf Driving Range
Room is founder and efficient, the area between activity and relaxation is well-separated;
Bright living room equipped withaspacious balcony which bring natural light and with good ventilation;
A comfortable master bedroom is good at ventilation and receiving nature light, enhance the comfort of living
Havingabay window, reasonable use of every inch of the area, increasing the natural lighting.
2 bedroom,2balcony,2bathroom, 1 living room, 1 dining room
Unit Layout is compact and very efficient, the living and bedrooms are well-separated;
Having balcony would able to see the beautiful landscape and City view;
Open space and bright living room equipped withaspacious balcony which can bring natural light and good ventilation.
Design well efficiency layout, partition of wet and dry area
Balcony and Bedroom are facing the community gardens with panoramic landscape
A comfortable master bedroom withabay window, is design good at ventilation and receiving nature light, enhance the comfort of living.
3 bedroom,3balcony,2bathroom, 1 living room, 1 dining room
Square type of unit, efficient layout, the area of living and bedroom are well-separated;
Porch was designed in the unit, the open space living room enhances the luxury of the unit;
Having bright living room equipped withaspacious balcony, also bring natural light and good ventilation;
Facing the community garden which provides youapanoramic landscape.
Category : Our Local
(Next Entry) Metroluxe Ratchada Condominium